3 qof oo ku dhimatay countiga Bomet halka 200 oo kalena cisbitaal la dhigay kadib markii ay cuno la sumeeyay cuneen – The Voice of Northeastern Kenya
3 qof oo ku dhimatay countiga Bomet halka 200 oo kalena cisbitaal la dhigay kadib markii ay cuno la sumeeyay cuneen
3 qof oo laba ay caruur yihiin ayaa ku dhimatay degaanka Sotik ee maamul goboleedka Bomet halka in ka badan 200 oo kalena cisbitaal la dhigay ka dib markii ay cuneen cunen la aaminsanyahay in la sumeeyay.
Dadkan oo billabay in ay muujinyaan sheegasho dhanka calooshan ayaa ugu dambeyn naf baxay waxaana dhismasha loo aaneynaa fuqbax iyo shuban.
Seddexda qof ayaa dhintay iyaga oo lagu daaweynayo cisbitaalka Kaplong ee degaanka Sotik halka caruurta ka mid ahna da’doodu lagu sheegay 6 sano iyo midka kale oo 10 sano jir ah.
Warka qaar ayaa sheegaya in cunadan oo lagu diyaariyay mid ka mid ah guri ku yaalo tuulada Kamureito ay in mudo ah taalay kadib markii horay loo kariyay.
Madaxa adeegayad caafimadka ee countiga Bomet Bernard Sowek ayaa sheegay in ay suurta gal tahay in dad badan ay dhibaatadan saameysay halka bukaanada qaarna xaaladoodu ay daranthaay balse ay la tacaalayaan.
Sarkaalkan ayaa intaas ku daray in dadka arrintan ay saameysay ay u badanyihiin dhalinyaro ay da’doodu ka hooseyso 30 sano.
Anthony Koskei oo ka mid ah odayaasha tuuladaasi ayaa sheegay in dad dhamaan aynan saameyn ku yeelanin cunitaanka rashiinkas.
Taliyaha saldhiga booliska ee degaanka Sotik Jonathan Ngalan ayaa dhankiisa sheegay in ay wadaan baaritaan ku saabsan dhacdadan oo walalc ku beertay dhamaan dadka ku nool degaankaasi ka tirsan countiga Bomet.
← Dowlada oo todobaadkan qeybin doonto lacag dhan 2.5 bilyan oo lagula tacaalayo macluusha
Liiiska qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo dib u eegis lagu sameeynayo →